Wasiirka maaliyadda dawladda federaalka iyo guddoomiyaha bangiga dhexe oo maanta Galkacyo ka soo degay. – Radio Daljir
Wasiirka maaliyadda dawladda federaalka iyo guddoomiyaha bangiga dhexe oo maanta Galkacyo ka soo degay.
Galkacyo, Feb 13 ? Waxaa maanta magaalada Galkacyo lagu soo dhaweeyey wafti ka socday dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, kaasoo ka soo kicitimay magaalada Muqdisho.
Waftiga dawladda federaalka ayaa ka koobnaa wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Cabdinaasir Maxamed Cabdulle iyo guddoomiyaha bangiga dhexe mudane C/llaahi Xaaji, kuwaasi oo imaatinkooda Galkacyo kaddib u sii tallaabay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Labadaan mas?uul ee dawladda federaalka, qaabilsanna xagga dhaqaalaha ayaa socdaalkoodu ay ku yimaadeen Puntland uu ku saabsan yahay sidii dawladda federaalka iyo Puntland iskaga garabsan lahaayeen arrimo la xiriira maaliyadda iyo lacagta sida uu Radio Daljir u sheegay wasiirka maaliyaddu.
Waftigaan federaalka ayaa inta ay ku sugan yihiin Puntland kulamo la yeelan doona madaxda dawladda Puntland, gaar ahaanna mas?uuliyiinta xagga maaliyadda iyo bangiyada.
Waa markii u horraysay oo mas?uuliyiinta maaliyadda iyo bangiga dhexe ee dawladda federaalka ay yimaadaan deegaannada Puntland, waxaana la tilmaamayaa in ay suuragal tahay abuuridda wadashaqayn ay yeesheen hay?adaha maaliyadda iyo bangiyada federaalka iyo Puntland.